७ चैत - गोरो अनुहार, ओठमा लिपिस्टिक, राम्ररी मिलेका आँखीभाउ अनि राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सेटो टप्समा सजिएकी सोफिया बोलिरहँदा सबैले ध्यानपूर्वक सुनिरहे।
काठमाडौं ७ चैत - चर्चाको शिखरमा रहेकी सेलेब्रिटी रोबोर्ट सोफिया बुधबार बिहान काठमाडौंको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएकी छिन्।
काठमाडाैं ६ चैत - हङकङको रोबटिक्स कम्पनी हेन्सन रोबटिक्सले विकास गरेको रोबोट सोफियालाई काठमाडौं ल्याइने भएको छ। ‘हट सोफिया’ को उपनाम पाएको यो रोबोटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले काठमाडौं ल्याउने भएको हो।
काठमाडौं २४ फागुन - म्यासेन्जरलाई छुट्टै एपको रुपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले म्यासेन्जर लाइट एप्सबाट भिडियो कल गर्न मिल्ने सुविधा थप गरेकाे छ।
भारत भन्दा नेपालको इन्टरनेट स्पिड प्रभावकारी
पोखरा १४ फागुन - मोवाइल इन्टरनेट स्पिडमा भारत नेपालभन्दा पछाडि परेको छ।
७ फागुन - तपाइँले बर्मुडा ट्रयाङ्गलको नाम सुन्नुभएको छ? आन्ध्र महासागरको यो क्षेत्रमा धेरै बिमान र पानीजहाज रहस्यमय तरिकाले हराएका छन्।
कारसहितको 'हेभी' रकेट अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण (भिडियाे)
२५ माघ - अमेरिकी उद्यमी इलोन मस्कले 'द फल्कन हेवी' नामको नयाँ रकेट प्रक्षेपण गरेका छन्। अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित केन्नडी अन्तरिक्ष केन्द्रबाट स्थानीय सयमअनुसार मंगलबार यो रकेट प्रक्षेपण गरिएको हो।
काठमाडौं १८ माघ - ललितपुरको भट्टेडाँडामा राखिएको इनरुट मोनोपल्स सेकेन्डरी सर्भिलेन्स राडार (इएमएसएसआर) माघ १८ देखि सञ्चालनमा आएको छ। जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को ९५ करोड र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको १५ करोड गरी १ अर्ब १० करोडको लगानीमा बनेको इनरुट राडार ललितपुरको...
फेसबुक इन्जिनियरले पत्ता लगाए सेकेन्डको ७० करोडौं हिस्सा
१५ माघ - फेसबुकका एक इन्जिनियरले समयको सबैभन्दा सूक्ष्म युनिटको खोज गरेका छन्। सेकेन्डको ७० करोडौं हिस्सा भनिएको सो युनिटको नाम ‘फ्लिक’ हो।
५ माघ - चीनका दुई हवाइ कम्पनी चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स र हाइनान एयरलाइन्सले आफ्ना यात्रुहरुलाई विमानभित्रै मोबाइल तथा ट्याब चलाउन दिन थालेका छन्। यी एयरलाइन्सले विमानमा वाइफाइ उपलब्ध गराएका छन्।
२८ पुस - फेसबुकको न्युज फिडमा ठूलो परिवर्तन गर्ने कार्यकारी प्रमुख मार्क जुकरवर्गले घोषणा गरेका छन्। फेसबुकमा बिताइएको समय अर्थपूर्ण बनाउने प्रयासस्वरुप न्युजफिडमा परिवर्तन गर्ने निर्णय लिइएको बिहीबार उनले जनाएका छन्।
२१ पुस - नयाँ वर्षका अवसरमा प्रत्येक पटक फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरवर्गले आफैँलाई एकएकओटा चुनौती दिन्छन्। हरेक दिन एक माइल दौडिने, हरेक दुई सातामा एउटा पुस्तक पढ्ने, आदि। तर यसपटक उनले फेसबुकका चुनौतीहरुलाई समाप्त पार्ने वाचा गरेका छन्।
१४ पुस - ब्याट्रीमा समस्या देखिन थालेपछि आइफोनका केही पुराना मोडललाई स्लो बनाएको विषयमा चर्को आलोचना भएपछि एप्पलले माफी मागेको छ।
१० पुस - चीनमा जमिन र पानी दुवै स्थानबाट उडान भर्नसक्ने ठूलो उभयचर विमानको पहिलो परीक्षण उडान सफल भएको छ। कुनलोङ नाम दिइएको यो एजी ६०० विमान चीन आफैँले बनाएको हो।
स्वीट्जरल्याण्डमा संसारकै भिरालो रेलमार्ग सञ्चालनमा
३ पुस - स्वीट्जरल्याण्डमा हालसम्मकै सबैभन्दा भिरालो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। स्वीट्जरल्याण्डको स्वाइजदेखि स्टुस गाउँसम्म चल्ने यो रेलका लागि विशिष्ट किसिमको डब्बा डिजाइन गरिएको छ।
२९ मंसिर - नासाका वैज्ञानिकहरुले केपलर–९० नामक टाढाको एक तारालाई परिक्रमा गर्ने आठौँ ग्रह फेला पारेका छन्। सौर्य परिवारबाहेक आठ ग्रह भएको तारा पहिलो पटक पत्ता लागेको हो।
१५ मंसिर - साउथ अष्ट्रेलियामा संसारकै सबैभन्दा ठूलो लिथियम-आयोन ब्याट्रीले विद्युत वितरण थालेको छ। एक सय मेगावाटको सो ब्याट्री टेस्ला कम्पनीले निर्माण गरेको हो।
१२ मंसिर - रुसले प्रक्षेपण गरेको नयाँ स्याटेलाइट अन्तरीक्षमा प्रवेश गरेको केही समयपछि सम्पर्कविहीन भएको बताएको छ। रुसको नयाँ भोस्तोच्नी कोस्मोड्रोमबाट प्रक्षेपण गरिएको मौसमसम्बन्धी स्याटेलाइट मंगलबार सम्पर्कविहीन भएको हो।
२२ कार्तिक - अष्ट्रेलिया र क्यानडाका सयौँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विशेषज्ञहरुले ज्यानमारा रोबोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग राख्दै सरकारलाई खुला पत्र लेखेका छन्।
काठमाडौं १७ कार्तिक - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर एकाउन्ट बिहीबार केही समयको लागि ‘डिएक्टिभ’ भयो। ट्विटरले पुनः सञ्चालन गर्नुअघि ४१.७ मिलियन फलोयर्स रहेका ट्रम्पको ट्विटर एकाउन्ट ११ मिनेट डिएक्टिभ थियो।
काठमाडौं १५ कार्तिक - २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचन प्रभावित पार्न रुसको भूमिका रहेको भनाईलाई बल पुग्नेगरी फेसबुकले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौं १४ कार्तिक - काठमाडौं मंण्डिखाटारका १४ वर्षिय निर्भिस दाहाल पोकेमोनको ‘सन एण्ड मुन’ जेनेरेट गरेरै चर्चा बटुल्न सफल भएका छन्।
बेइजिङ १३ कार्तिक - यसै साता चीनको हुनान प्रान्तस्थित झुझोउ सहरमा विश्वकै पहिलो ‘स्मार्ट ट्रेन’ को परीक्षण सुरु गरिएको छ। यसले विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्नुको कारण हो, यो रेल चलाउन लिक (ट्र्याक) आवश्यक पर्दैन। यो ‘भर्चुअल ट्र्याक’ चल्छ।
९ कार्तिक - साउदी अरब रोबोटलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ। साउदीले हङकङको ह्यानसन रोबोटिक्स कम्पनीले निर्माण गरेको मानिसजस्तै देखिने ‘सोफिया’ नामक रोबोटलाई नागरिकता दिएको हो।
३१ असोज - दुई मृत तारा आपसमा ठोक्किएको दृश्य र तरंग आफूहरुले पहिलो पटक अवलोकन गर्न सफल भएको खगोलविद्हरुले सोमबार जनाएका छन्। आपसमा ठोक्किएर विलय हुनुअघि ती दुई मृत ताराले तीव्र गतिमा एकअर्काको फन्को मारेका थिए। यो खोज खगोल विज्ञानमा नयाँ युगको सुरुवात भएको...
२६ असोज - संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा दिगो विकाससम्बन्धी बहसमा ककसले भाग लेलान्? पक्कै पनि दिगो विकासका विज्ञहरु नै त्यसमा सहभागी हुनेछन्। तर यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघको यस्तै एक कार्यक्रममा भने रोबोटले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएको छ।
काठमाडौं २५ असोज -
काठमाडौँ १९ असोज - बुधबार गुगलले आफ्नो नँया स्मार्टफोन पिक्सेल २ सार्वजनिक गर्‍यो। तर त्यो स्मार्टफोनसँगै सार्वजनिक गरिएको वायरलेस इयरफोनले भने बढी चर्चा पाएको छ। यसको खास कारण हो, त्यो इयरफोनको अनुवाद क्षमता। सो इयरफोनको सहयोगमा एकअर्काको भाषा नजानेका दुई व्यक्तिले...
१३ असोज -
१३ असोज - शुक्रबार चीनले लङ मार्च–२ सी नामक अन्तरीक्षयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ। सिचुवान प्रान्तको सिचाङ स्याटेलाइट लन्च सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको सो यानले तीन ओटा स्याटेलाइट बोकेर पृथ्वीको कक्षमा पुर्‍याएको छ।